Iibhayisekile Zivalela Abavelisi & Abaxhasi | I-China iSithuthuthu siVala uMzi-mveliso
Isimbozo semotounamagama amaninzi ahlukeneyo, isigqubuthelo sesithuthuthu, iimpahla zesithuthuthu, indawo yokuhamba ngesithuthuthu njalo njalo.Sincoma iintlobo ezimbini zokugubungela isithuthuthu, olunye luhlobo olukhulu lwesilivere. Ingapaka ngokulula iinqwelomoya ezahlukeneyo zokuhamba, ikhusele imoto yakho eluthulini, isanti, isanti, imvula, ikhephu, umoya kunye neqabaka, kwaye uthintele abantu ongabaziyo ekuchukumiseni nakungcoliseko oluvela kwilindle lezilwanyana.
Isithuthuthu esiShukumayo siVala iPort Port
Ezi zithuthuthu zokugubungela zikwazi ukumisa ngokulula iintlobo ngeentlobo zezithuthuthu ezincinci neziphakathi, zikhusele imoto yakho eluthulini, esantini, kumhlaba, kwimvula, kwikhephu nasemoyeni, kwaye kuthintele abantu ongabaziyo ekuchukumiseni nakungcoliseko oluvela kwilindle lezilwanyana. Inkangeleko ilula kwaye inesitayile, inemvakalelo eyomeleleyo yetekhnoloji.
Kumisa kunye nokuValwa kweeSithuthuthu
Le carport yezithuthuthu inokumisa ngokulula izithuthuthu ezahluka-hlukeneyo, ikhusele imoto yakho eluthulini, isanti, isanti, imvula, ikhephu nomoya, kwaye uthintele abantu ongabaziyo bachukumise kwaye bangcolise ilindle lezilwanyana.
Inokulungiswa kumhlaba othe tyaba okanye ifakwe kwitreyila. IQ, inkangeleko kusefashonini kakhulu, kwaye uyilo luvo olomeleleyo lwetekhnoloji.Omnye luhlobo lwethu oluncinci olumhlophe, inokumisa ngokulula iintlobo ngeentlobo zeeloliwe zokufuduka ezincinci neziphakathi. Ezinye izinto ziphantse zafana nemveliso yangaphambili. Kodwa umbala kunye noyilo zahlukile kancinane. Uyakwazi ukwahlula kwaye ukhethe ngemifanekiso kwiinkcukacha.